काठमाडौं महानगर’पालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह निर्वाचित भएका छन्। बालेन शाह बिजयी भए’संगै युवा’हरूको ठूलो जमात उनको सम’र्थनमा उत्रिएको छ। ३२ वर्षे शाहले उमेरले आफ्नो बाबु–आमा भन्न सुहाउने प्रतिस्पर्धी’लाई पछि पार्दै मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन्।
काठमाडौं महानगर’पालिकाको मेयर पदमा नेकपा एमाले’बाट प्रतिस्पर्धा गरेको केशव स्थापित उमेरले ६३ वर्ष पुगेका छन् भने नेपाली कांग्रेसबाट महानगर’पालिकाको मेयर पदमा प्रतिस्पर्धा गरेकी सिर्जना सिंह ५९ वर्षकी हुन्। स्वतन्त्र उम्मेद’वारी दिएर काठमाडौं महानगर’पालिकाको मेयर पदमा विजयी हुँदै शाहले इति’हास रचेका हुन्।
सामा’जिक सञ्जाल बालेनकै पक्षमा देखिन्छ। प्रायः राजनीतिक विषयमा चुप लाग्ने कला’कारहरू पनि बालेन’को पक्षमा बोलेका छन्। उनीहरूले खुलेरै बालेन’लाई भोट मागेका थिए।को हुन् बालेन शाह ? बालेन शाहको वास्तविक नाम बालेन्द्र शाह भए पनि उनी बालेन शाहको नामले परि’चित छन्। १४ वैशाख २०४७ मा काठ’माडौंको नरदेवीमा जन्मिएका उनी हाल गैरिगाउँ, तिन’कुनेका स्थायी बासिन्दा हुन्।
आयुर्वेदिक चिकि’त्सक डा. राम नारायण शाह र धुव्रा देवी शाहका सन्तानका रुपमा जन्मिएका उनीको पुर्खाली थालो भने मधेश प्रदेशमा रहेको महो’त्तरी जिल्ला हो। काठमाडौंको नर’देवीमा जन्मे-हुर्केका बालेन पेसाले इञ्जि’नियर हुन्। उनका दाजु कुशल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छन्। भाउजू बैंकमा काम गर्छिन्। बहिनी चित्र’कार हुन्। बालेनकी श्रीमती सविना जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छिन्।
शाहको प्रारम्भिक अध्धयन काठमाडौं नर’देवीमा रहेको जल्जला स्कूल’बाट भएको हो भने स्कूल’पछिको उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन काठमाडौं तीनकुनेमा अवस्थित भिएस निकेतनबाट गरेका हुन्। उनको स्नातक तहको अध्ययन काठमाडौंमै रहेको हाइट हाउस कलेज’बाट भएको थियो। त्यहाँ उनले सिभिल इन्जि’नियरिङको अध्ययन गरेका थिए।
अध्ययनको क्रममा स्नाको’त्तरका लागि उनी भारत पुगेका थिए। भारत, कर्नाटकबाट उनले स्टकचरल इन्जिनि’रिरिङको अध्ययन पूरा गरेका शाह विभिन्न निर्माण’सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन्। उनी पेशाको क्रममा देशका ६५ जिल्ला पुगेको बताउँछन् । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि उनले उद्धार र राहत’को काममा सक्रिय भएर समाज’सेवीको छवि पनि बनाए ।
२०७२ मा नेपालमा गएको महा’भूकम्प पश्चात देशको विभिन्न स्थानमा पुगी उनी पुनःनिर्माणको काममा संलग्न रहेका उनको दाबी छ। भूकम्प र कोभिड महा’मारिका बेला काम गरे पनि नेतृत्वमा नै बसेर काम नगरिकन आफ्नो योजना प्रभाव’कारी नहुने देखेर काठ’माडौंको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएको। आफ्नै नाममा रहेको बालेन कन्स’ल्टिङ र कन्स्टक्सन प्रालिका उनी सञ्चालक हुन्।
शाह र्‍याप ब्याटल गायक पनि हुन्। नेपाली र्‍याप ब्याटल दोस्रो लिगका विजेता हुन् भने उनी विगत लामो समय’देखि संगीतको यो विधामा संलग्न रहँदै आएका छन्। कुनै पनि नगर’पालिकाको मेयर भनेको त्यहाँको ‘सीईओ’ हो भन्ने शाह व्यवस्था’पकीय कम्जोरीका कारण मेयरहरुले राम्रोसँग काम गर्न न’सकेको दाबी गर्छन्। (नेपाल लाईभ, सेतोपाटी, अनखबर, अपि वान टिभिको सहयोगमा) हेर्नुस् बालेन शाहको पुर्खौली घर तलको भिडियोमा ।
२०७९ असार ४, शनिबार ००:४३ 1 Minute 196 Views
बिजुलीका तारमा हिँडेका माइला विक मिडियामा, त्यसो गर्नुको कारण आँफैले खोले (भिडियो सहित)